वाह यस्तो पो मान्छे
रामायणलाई उर्दुमा अनुवाद गरेर मुस्लिम समुदायमा पुर्‍याउने इच्छा छ । लोप हुँदै गएको बालन संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न दिलोज्यान लगाएर खटेका छन् । हनिफ मियाँ अलिमिया वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पनि हुन् । मुस्लिम समुदायमा संस्कृतमा आचार्य गर्ने सायद हनिफ नै पहिलो व्यक्तित्व होलान् । जनप्रतिनिधि भएर राममन्दिर बनाउनेदेखि भानुभक्तको शालीक पनि उनै हनिफ मियाँले बनाए । समुदायमा कुरा काट्ने ननिस्केका होइनन् । हनिफले ती आलोचकको मुखमा पनि ताल्चा ठोकिदिए ।
अन्ततः अलिमिया वाङ्मय प्रतिष्ठानका सबैलाई हनिफले हिन्दु धर्म भित्रको सौन्दर्यता ग्रहण गर्ने ग्राहक बनाई छाडे । कति पवित्र छन् हनिफका उद्देश्य, उनी भन्छन्( हरेक धर्ममा आस्तिक र नास्तिक हुन्छन् नै । धर्मको कुनै परिधी र पावन्धी हुँदैन । हामीले सुनेको, देखेको र भोगेको मुस्लिम यथार्थ भन्दा कोसौं टाढा छन् हनिफ मियाँ । आतंकसँग जोडेर हेरिने नजरमाथि सर्वधर्म समभावको चस्मा लगाइदिएका छन्, हनिफले । आतंककारी मुसलमान हुनै सक्तैन त्यो त सैतान हो भन्छन् हनिफ मिया ।
चार जात छत्तिस वणर्को शान्त फुलबारीका माली हुन् उनी । एउटै कुरान पढेकाहरूमा पनि हेराइ र गराई फरक हुन्छ । स्कुलिङ हो महत्वपूणर्, कस्तो संस्कारमा हुर्कियो ? संगति कस्ता थिए ? ले पनि निकै माने राख्छ । हनिफ जस्ता सकारात्मक पुञ्जहरूको पहिचानको खाँचो छ समाजलाई । भाइचाराको खम्बा हुन् हनिफ । एकाध उलफट्याङको कृयाकलाप सिंगो धर्म र समुदायसँग जोडिनु कदापी न्यायसंगत हुँदैन ।
जात, थर नै लुकाएर संस्कृत पढ्ने मोह जाग्नु इश्वरीय पराकम्प हो । जब भगवान प्रति एकलब्य जस्तै भएर हनिफ मियाँले संस्कृत पढ्ने निणर्य गरे, मनभित्र कताकता डरत्रासले झकझकाई रहेको थियो । तर हनिफको ईच्छा शक्तीको अगाडि डरत्रास टिक्न सकेन । हनिफ मियाँको अगाडि आचार्य थपिनु चानचुने कुरा होइन । देशविदेश जताततै इश्वरीय महिमाको व्याख्या गर्दै हिन्दु र हिन्दुत्वको गरिमा उच्च पार्ने कर्ममा तल्लिन हनिफ प्रति शब्दले व्यक्त गर्ने भाव भन्दा बढी मनदेखी नमन गर्न मन लाग्यो । समाजमा लुकेका अनमोल यस्ता व्यक्तित्व खोेज्न जाँगर चलाउनु पर्दछ । बोल्नेको पिठो बिक्ने, नबोल्नेको चामलमा चिलेसा पर्ने संस्कारको अन्त्य हामीले नै गर्ने हो । आँखा अगाडिको सदृश्य र क्षणिक आनन्द नै मात्र जीवन होइन । छाडेर जाने कर्म अजर अमर रहन्छ । हनिफ मियाँका मुखारबृन्दबाट निस्केका यी वाणीले के भन्न खोज्दैछ त ?
पिंध नभएको लोटामा समुद्र नै हाल्नोस् रहँदैन । मुख र पिंधको महिमा बुझ्न जरूरी छ । हामी धेरै भट्किसक्यौं । बाटो बिराउनु र गलत बाटो हिँड्नुमा फरक छ । हामी कुबाटो हिँड्दै छौं कि सुबाटो ? आफ्नै ब्रम्हले ठम्याउनु पर्छ । लहै लहैमा भौंतारिएर अन्टसन्ट बकबक गर्नुको कुनै तुक छैन । आग्रह गर्ने हो बिग्रह निम्त्याउने हो । सदाचारले गरिने आग्रह र दुुराचारले भित्रिने द्वन्द्वले समाजमा पार्ने असर के हो ? बुझ्ने हामीले हो परायले होइन । अर्काको आश भोकै बास भने जस्तै हो परनिर्भरता । त्यसैले पनि आत्मनिर्भर हुनु अतिआवश्यक छ । स्वधर्म र स्वस्थ आचार बिचारका धनी हुन पाउनु पनि भाग्य हो । सनातन रितीरिवाजले भरीभराउ हाम्रो भुगोल स्वच्छ छ, स्वाबलम्बी छ र आफ्नो रितीरिवाज जोगाउन कदापीपछि हट्दैन । हनिफ मियाँको सन्देशले दिन खोजेको उपहार सायद यहि हो । जुनी फेरिन्छ, युग परिवर्तनशील छ बाँकी तपाईंको इच्छा ।। ॐ नम शिवाय ।